Filtrer les éléments par date : mercredi, 22 juillet 2020
mercredi, 22 juillet 2020 22:29
RN13 Tolagnaro – Amboasary : Tapaka ny lalana ho an'ny fiara mihoatra ny 3 taonina
Fahasimbana amin’ny tetezana ao Manambaro, eo amin’ny PK471+800, no anton’ny fahatapahan’ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an’i Tolagnaro sy Amboasary, nanomboka androany, mandram-pahavitan'ny fanamboarana, ho an'ny fiara mihoatra ny 3 taonina.
Tsy misy fivilian-dalana azo atao eo amin’io toerana io.
mercredi, 22 juillet 2020 22:18
Asa fanaovan-gazety: Nodimandry i Tolotra Rakotoniaina Alain, mpanao gazetin’ny Radio Bongolava
Nodimandry androany teo amin’ny faha-41 taonany i Tolotra Rakotoniaina Alain fantatra tamin’ny solon’anarana Big Tolotra teo amin’ny sehatry ny haino aman-jery. Notsaboina teny amin’ny hopitaly Anosiala Ambohidratrimo izy, ary Covid-19 no voalaza fa nandavo azy.
Mpanao gazety tao amin’ny Radio Bongolava Tsiroanomandidy i Big Tolotra, Radio Bongolava vao avy nanamarika ny faha-25 taona nisiany ny 15 jolay teo, ary i Big Tolotra no isany mpiasa tranainy tao.
Nindaosin’ny fahafatesana androany i Raberanto Jean Noel na i Nono Raberanto araka ny anarana maha mpanakanto nahafantaran’ny maro azy, tao amin’ny tarika Raberanto.
Nolazoin’ny aretin’ny voa izy, ary io no nandavo azy tamin’izao faha-61 taonany izao.
Hatao rahampitso alakamisy 23 jolay eny Tanjombato ny fandevenana azy.
Nanao fampahafantarana ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy (MEDD) fa ny hetsika rehetra hitadiavana tohana ara-bola noho ny fahamaizana nitranga tamin'ny trano nisy ny Foibem-pirenena momba ny Tontolo Iainana (ONE), ny alin'ny 15 jolay lasa teo, dia tsy maintsy filazana ôfisialy avy amin'ny Minisitera (MEDD) sy ny ONE irery ihany.
Izay rehetra mitonona ho manana fahefana hanao izany dia sokajiana ho mpisoloky ary henjehina araka ny lalàna.
Araka ny fampitam-baovao nataon’ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena dia marary mitondra ny tsimokaretina Covid-19 miisa 29 ankehitriny no tsaboina eo anivon'ny Hôpitaly Miaramila Soavinandriana.
« 19 no mampiseho sori-traretina misy fahasarotana ary mampiasa fitaovana fampisefoana » raha ny fanazavana nomen'ny Dokotera Kolonely Tovone Myriame.
Miasa andro aman'alina ireo dokotera miaramila miisa 2 sy mpitsabo mpanampy 4 ary mpikarakara 2 izay mifandimby manara-maso tsy an-kiato ny fivoaran'ny toe-pahasalaman'ireo mararin'ny Covid-19.
Maimaim-poana ny fitsaboana ary ny hôpitaly no miantoka ny fanafody hitsaboana araka izay misy ao aminy. Mandray an-tanana feno sy mitsabo tanteraka ireo mararin'ny Covid-19 ahitana sori-traretina efa misy fahasarotana ity hôpitaly miaramila ity.
(Loharanom-baovao: Ministeran'ny Fiarovam-pirenena)